Allgedo.com » Mareykanka oo ka Hadley Duqeymaha Droneska ay ka Geystaan Wadamo Soomaaliya ay ka mid tahay
Iyadoo Mareynkanka duqeymo dad badan oo shacab ah ay ku dhinteen ka geystay wadamo Soomaaliya ay ka mid tahay ayaa markii ugu horeysay Senitaro ka tirsan Mareynkanka waxay soo bandhigeen qiyaas ahaan tirada shacabka iyo dagaalyahanada ku dhintay duqeymaha diyaaradaha Droneska ee Mareynkanka sida Sharcidarrada ah ay u geystaan.
Sida warbaahinta gudaha Mareynkanka ay baahiyeen iyagoo soo xiganaya xildhibaano ka tirsan Mareynkanka, diyaaradaha Mareynkanka aan cidi duulin ayaa wadamada Soomaaliya, Yemen, Pakistan iyo Afgaanistaan waxay ku dileen dad gaaraya 4,700 -Qof oo isugu jira dagaalyahano iyo shacab sida warbixinta ay sheegeyso.
Wakaalada wararka AFP oo arintaan wax ka qortay ayaa sidoo kale waxay daaha ka rogtay in arintaan Saraakiisha dowlada Mareynkanka isku qilaafsan yihiin duqeynta diyaaradeed ee wadamo Soomaaliya ay ka mid tahay sida sharcidarada ah looga fulinayo, iyagoo qaarkood qaba fikrada ah in inta badan duqeynta goobaha laga fuliyo ay ku dhintaan dad shacab ah marka laga soo tago dagaalyahanada ku dhimanaya.
Waa markii ugu horeysay Shaqsi ka tirsan dowlada Mareynkanka ama u taagan uu shaaca ka qaado tirada dhabta ah ee ku dhimata duqeymaha Mareynkanka uu geysto, kuwaasi oo cambaareeyeen Kooxaha u dooda xaquuqul insaanka iyo Kooxaha kale ka hortaga xadgudubyada loo geysto bini-adamka.
Warbaahinta gudaha Mareynkanka ayaa si weyn u hadal haaysa arintaan Muranka badan dhalisay ee duqeynta sharcidarada.
Mareynkanka ayaa diyaaradaha Droneska ee aan cidi kaxeynin, wuxuu inta badan kula dagaalamaa dagaalyahanada Al-Qaa’ida iyo Kooxaha kale ee xariirka la leh, isagoo kula bartilmaameedsado wadamo ay ka mid yihiin: Soomaaliya, Yemen, Bakistaan iyo Afgaanistaan, balse inta badan duqeymaha uu geysto waxaa ku dhinta dad shacab ah oo goobta ka ag dhow, kuwaasi oo ah Xoolo dhaqato ama Beeraley.